Nnwale nnwale nke Minecraft V 1.8.0
Kedu ihe bụ Minecraft Trial APK
Nnwale nke Minecraft na -enye gị ohere ịme egwuregwu ahụ n'efu. Ọ bụ egwuregwu efu, nke akpọchiri akpọchi nke egwuregwu ama ama ama ama. Ọ na -enye gị ohere iji ihe okike zuru oke mepụta ihe ọ bụla ịchọrọ na gburugburu gị. Eluigwe nke Minecraft bụ oporo gị, ma ịchọrọ ịrụ ụlọ mara mma, nnukwu ụlọ, ma ọ bụ ọbụna ngwa agha. Agbanyeghị, enwere nsogbu. Naanị mode Survival dị, ọ nwere naanị nkeji 90 nke oge egwuregwu.
Minecraft bụ egwuregwu na -enye gị ohere igosipụta onwe gị site na imepụta ihe.
Minecraft bụ egwuregwu sandbox nke jikọtara ihe okike, nlanarị na nyocha. Ọ bụrụ na ị maghị egwuregwu a, ọ bụ egwuregwu sandbox. A ga-atụba gị n'ime ihe mebere na-enweghị usoro ebe ị ga-egwupụta akụ maka ngọngọ. Enwere ike iji akụrụngwa ndị a wee wuo ụlọ gị na ngwa ọgụ iji chebe onwe gị pụọ n'aka ndị mwakpo.
Moddị abụọ dị na egwuregwu ahụ. Ọnọdụ nlanarị na -enye gị ohere ichebe onwe gị pụọ na gburugburu ebe dị ize ndụ juputara na ihe ndị e kere eke. Enwere ike ịmepụta ngwa agha iji nyere aka na ọgụ, mana ịrụ ebe nchekwa dị mma na -ebute ụzọ. Ị nwekwara ike igwu egwu na ọnọdụ okike, nke enweghị nnukwu anụ na ihe egwu ndị ọzọ. Ụlọ na owuwu dịịrị gị n'aka.
Minecraft nwere atụmatụ yiri Lego, nke na-eme ka ọ na-amasị ọtụtụ ndị egwuregwu. Ọ dị mma maka ndị egwuregwu na -eto eto n'ihi ọmarịcha eserese eserese ya na egwu na -atọ ụtọ. Ọ nwekwara ọnọdụ nlanarị enyi na enyi.
Minecraft bụ egwuregwu igwu egwu ebe ị ga-ahọrọ njem nke gị. Rụpụta ihe ọ bụla site na obere ụlọ ruo na nnukwu ụlọ n'ime ụwa na -adịghị agwụ agwụ*. N'ime nnwale a nwere obere oge, ị ga-enwe ike igwu egwu Minecraft na ọnọdụ nlanarị, ebe ị ga-enwe ike wuo ngwa ọgụ na ngwa agha iji chebe onwe gị pụọ na ihe ndị na-egbu egbu. Mee, chọpụta, wee dịrị ndụ!
Zụta egwuregwu ahụ n'oge ọ bụla ma ọ bụ mgbe ikpe gị gasịrị iji nweta ahụmịhe Minecraft zuru oke, nke gụnyere ọnọdụ okike, ọtụtụ mmadụ na ihe ndị ọzọ.
Maka n'efu, kpọọ Minecraft
Afọ asatọ gara aga, Mojang wepụtara Minecraft na nke mbụ ya. Ndị na -egwu egwuregwu nwere ike iji nnwale ahụ lelee ma egwuregwu a na -aga n'ihu tupu ịzụrụ mbipụta zuru oke n'oge mmalite nke Minecraft Pocket Edition. Agbanyeghị, ehichapụrụ ngosi ahụ na 2013, ọ nweghị ụdị nnwale maka ekwentị gam akporo enwebeghị ike ịnweta kemgbe ahụ.
Ị nwere ike nwalee ugbu a Minecraft na -emefughị ​​ego ọ bụla maka nyocha nke Minecraft. Ruo nkeji iri itoolu, ị nwere ike kpọọ ụdị onye lanarịrịnụ ama ama. Ọ gwụla ma ịzụrụ mbipụta egwuregwu ahụ zuru oke, agba a ga -akwụsị mgbe ngụ oge ga -agwụ.
Agbanyeghị, naanị n'ihi na ọ bụ mbipụta nnwale apụtaghị na a ga -amachibido gị na nhọrọ gị. Maka ndị mbido, ị nwere ikike zuru oke maka ihe ị ga -eji rụọ ngwaọrụ gị. Nhọrọ na atụmatụ dị iche iche dịkwa na egwuregwu ahụ. Ị nwere ike hazie ahụmịhe egwuregwu gị site n'ịgbanwe narị narị eserese, dịka ọmụmaatụ. Ị nwekwara ike ịgbanwu site na njikwa anya gaa na njikwa ihuenyo mmetụ.
N'ozuzu, ewezuga oke oge, Nnwale Minecraft na -enye ahụmịhe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu zuru oke. Ị nwere ike ịlụ ọgụ maka ihe ndị e kere eke, wuo ụlọ nke gị ma nyochaa ụwa.
Aha ngwa Minecraft Tree ngwa
Versiondị Ngwa 1.8.0
Minecraft Tree ngwa
Nseta ihuenyo nke ọnwụnwa Minecraft APK
Ndị otu anyị enyochala akụkụ niile nke Minecraft Trial APK, anyị ahụghị nje ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla na -egosipụta ndị ọrụ anyị ka ha budata ihe ọzọ ha na -achọta. Ụda Minecraft Trial APK na eserese dị mma nke ukwuu, Anyị nwara ụzọ abụọ site na iji ekweisi na onye na-ekwu okwu ma ọ dịkwa mma n'akụkụ anyị, eserese dịkwa mma site na mbido peeji ruo na egwuregwu egwuregwu, mgbe ụfọdụ ọ na-enye nsogbu n'ihi ụdị nkọwa ngwaọrụ. dị iche na ngwaọrụ ọ bụla anyị na -anwale n'ọtụtụ ekwentị na -arụ ọrụ na gam akporo 10,9,8 na ụfọdụ akara ekwentị ama ama dịka, Samsung, Xiaomi, RealMe, Asus, Iphone na ọtụtụ ndị ọzọ ma anyị ahụghị nsogbu ọ bụla.
The Minecraft Tree ngwa nwere ike ibudata. Nbudata ngwa ahụ dị mfe dịka ịgbaso usoro ndị enyere n'okpuru. Inweta mod nwere ike mezuo site na isoro usoro ndị edepụtara n'okpuru.
Chere sekọnd ole na ole mgbe ịpịrị njikọ ahụ, ekwentị gị ga-amalite nbudata Minecraft Tree ngwa na obere oge.
Mgbe nbudata pịa faịlụ Minecraft Trial APK wee wụnye ya na ekwentị gị.
Ugbu a ị nwere ike ịhụ ihe na ebe ị ga -ebudata Minecraft Trial APK, anyị na -enwetakwa data niile iji jikọta ma nwalee ihe ọ bụla na Minecraft Trial APK na nkwubi okwu ikpeazụ anyị bụ ngwa a adịghị mma, dị mfe iji, dị mfe iji, yana a haziri nke ọma karịa nke gọọmentị. Ndị hụrụ ngwa n'anya nke na-anụ ọkụ n'obi igwu egwu ma jiri Minecraft Trial APK nwere n'efu ugbu a na enweghị nsogbu maka nbudata.
Mupen64plus Apk 3.0.292 [Mmelite kachasị ọhụrụ] FRANCISCO ZURITA
Tiger Ball HACK APK 1.2.3 [Kpakpando na -akparaghị ókè] Laxarus
Akụkọ Knights 0.25SE [Pro emechiri emechi]
Super Chicken Jumper APK 1.0.9 [Kacha ọhụrụ]
Slap na agwa agwa 1.04 [MOD anaghị emepe emepe]